5 Saffarada Day From Rome Si Baadh Italy | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Saffarada Day From Rome Si Baadh Italy
Rome waa magaalo qurux badan, laakiin mararka qaarkood nin socoto ah damacdaa yara kala duwan. Kuwa joogaan dheer Rome ku filan si ay u sahamiyaan waxaa laga yaabaa jeclaan lahaa in eegno agagaarka degaanka, sidoo kale. Nasiib wanaag, waana waxa safar maalin waxaa loogu talagalay! Ka fiirsaneysa sida wanaagsan ugu xidhan Rome waa tareen leh meelaha ugu, dhibaatada ugu weyn ee uu doortay meel ay aadaan. Si kastaba ha ahaatee, aannu u diyaarinnay liiska si ay u caawiyaan aad samayn kaliya in. halkan waxaa ku qoran 5 Safarada Maalinta ee Rome Si loo Baadho Talyaaniga taas socdaal kasta wuu ku raaxeysan doonaa!
1. Trip A Maalinta Si Ostia Antica
Ostia Antica waa dejinta hore ku dhawaad ​​30km Rome ka fog. Back wakhtigii Qarniyadii, magaalada oo intaasu waxay ahayd dekedda weyn ee Rome oo waxaa jira wax badan oo ay halkan ka eeg. Tusaale ahaan, you can take a look at the public baths with beautiful mosaics.
Intaas waxaa sii dheer, sidoo kale waxaa jira ee lagu dheelo iyo waddada ugu weyn ee. arkaynin Guryohoodii mooyee waxa ku jiri hadhaagii a macbudyo weyn yar, sida mid ka mid ah oo heegan u Hercules.
Saffarada Day kale oo Rome ka in aanu kuu soo jeedinaynaa waa Tivoli, baxsashada magaalada jecel ee Emperor Roman ee Hadrian ee AD qarnigii labaad. Oo isagu wuxuu dhisay Hadrians Villa in this magaalada dhow u qurux badan, oo intuu ku dhamaaday jeelahay badan uu deganaansho ee Rome.
Sida meesha nasashada kama dambaysta ah, Hadrians Villa ee Tivoli leeyahay Beero iyo maktabadaha, iyo waxa ay ugu danbeyn noqday magaalada keligeed. Daaraha waaweyn oo macbudyo waa qayb ka mid ah xiiso of tamashle, taas oo ay u Tivoli u qalantaa ka dhigi doonaa safarka maalinta.
3. Saffarada Day From Rome Si Bracciano
Hop off tareenka ka dib markii saacad kortaan dheer Rome ka, oo aad timaado doonaa Bracciano. qurux Tani magaalada Dr Makumbe on xeebaha Bracciano Lake ayaa badan indhaha inay dalab. Tusaale ahaan, waxaad booqan kartaa Orsini Odesalchi Castle, which was a residence of many nobles.
Waa maxay more, Taasi waa Daartii Aakhiro araggiisu sidoo kale wuxuu ahaa meeshii Katie Holmes guursaday Tom Cruise ee 2006. Intaa waxaa dheer, waxaad booqan kartaa cathedral Braccianos, taas oo la dhisay waqtiyada Dr Makumbe.
Rome si ay Tareenadu Bracciano
Bracciano in Tareenadu Rome
Bracciano in Tareenadu Manziana
Santa Marinella in Tareenadu Bracciano
Sida magaalada ka mid ah muhiimadda taariikhiga badan, Naples waa a waa in booqo qof kasta oo dooneysa in ay la kulmaan Italy iyo in ay qaataan a Saffarada Day Rome ka. Views ee Mount Vesuvius, naqshadaha cajiib ah, iyo diiran, dadka deegaanka saaxiibtinimo qaar ka mid ah qaababka ugu muhiimsan ee magaalada. Si kastaba ha ahaatee, Naples ayaa sidoo kale caan ku ah sida ku dhashay ee pizza Margherita. Waa maxay more, waxaad booqan kartaa pizzeria ay ka dhigtay pizza ugu horeysay - Antica Pizzeria PortAlba.
Waswaasiyo Our final Maalinta Saffarada Rome ka yahay Florence, taas oo u muuqdaan kuwo laga yaabaa in waxoogaa aad u fog, waayo, safar maalin. Si kastaba ha ahaatee, waxa si fudud yahay iyo si deg deg ah laga helo tareenka. Oo kaliya maxaa yeelay, taariikhi ah, architecturally faraxgelinta xarunta of Florence ka dhigi doonaa safarka u qalantaa. Duomo di Firence waa cathedral caanka Florence, kaas oo si fiican oo soo bandhigtay muuqaalka jirka ee magaalada. Booqashada Florence safar maalin Rome ka ah waa hab fiican si ay u maroojiyaan aad fasax.
Dhammaan oo ka mid ah meelaha u dhow Rome ay ka qiimo booqanaya. Haddii aad raadinayso safar maalin kaamil ah, soo qaado aad ugu jeceshahay iyo tagaan. Waa in si sahlan!
Bari si ay Tareenadu Florence
Diyaar ma u tahay in aad u quudhin Talyaani? Boorso bacaha aad, qorsheeyo hawlo fasax aad, iyo Ballansan Your Tigidhada in Tareenku waqtiga!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Saffarada Day From Rome Si Baadh Italy” gal your site? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fday-trips-rome-explore-italy%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)